Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Dhiira qawween faranjiitii fi nafxanyootaa harka kennachiisuu dadhabde dullumaaf hiyyummaan harka kennachiifte!
Dhiira qawween faranjiitii fi nafxanyootaa harka kennachiisuu dadhabde dullumaaf hiyyummaan harka kennachiifte!
Goota faarsuu malee erga goota tahuu dadhabne kan du'e qofa osoo hin taanee,goota lubbuun jirus haa yaadannuu.
Yeroo goobanoonni kaleessa biyya gurgurataa bayan jireenya gaarii jiraatan goonni keenna kan kaleessa sabaaf of kennee waardiyyaa ‪#‎oromiyaa‬ tahee diina dura dhaabbataa baye har'a humni isaa dadhabnaan diina hiyyummaa keessatti kufee akka waan lammii hin qabneetti bakka kufetti hafe!
Yaa oromoo meeqa keenyatu goota kaleessa oromiyaa tiksee har'aan nuun gaye bakkoota gara garaatti quba qabna?
Keessattuu oromoon kutaa Baalee gootota keenna kan yoo ittiin dhaadatuuf maqaa isaaniitiin of waamnu hangam takka jireenya isaanii quba qabna?
Maqaa qofaaf ani sanyii ‪#‎waaqooti‬ ofiin jechuun maal nufayyadaa?
J/Waaqoonillee silaa du'uu baatee akkuma koloneel aliyyii cirrii kanatti akka irraanfannu beekaa!
Goota lubbuun jiru irraanfannee goota lubbuun darbe faarsaa ooluun akka waan baga du'e jechuuti.
Erga gootota baalee warra lubbuun darban faarsinee kanneen lubbuun jaraa har'allee jirtu kan akka K/Aliyyii cirrii maaliif irraanfanna?
Inni gootaa miti jechuudha moo gaafa inni du'e ittiin of dhaaduufi?
Kan osoo lubbuun jiruu irraanfatame K/aliyyii cirrii qofaa miti.
Hedduudha kan akka isaa roorroon hiyyummaa manatti deebifattee irra garmaamtu!!!!
‪#‎haadha‬ oromoo tan akka ‪#‎Aashaa‬ Muhammad gadaa qaalluu faatis lubbuudhaan ni jiru.garuu lubbumaan jiran malee jiraannaan hin jiran.
Yaa Abbootii qabeenyaa godina Baalee
Yaa hayyootaa fi beektota godina baalee
Yaa oromoo diaspora kan biyya alaa keessa jirru,yeroo goonni hambaaWaaqoo jireenya gadadoo akkanaa jiraatu nuti cal'ifnee ijaan ilaallu lafeen gootota kan kaleessa dhumanii maal nuun jedhu jennee of haa gaafannu.
Yaa kan dhiiga oromummaatiif quuqamtan hundi keessan gootota oromoo kan kaleessa oromiyaadhaaf waardiyyaa tahaa turan iyyaafannee jiruu gadadoo isaan keessa jiran keeessaa haa baafannuun dhaamsa kooti.
Posted by Hasan Ismail at 2:10 AM